Kedu otu esi eji Amazon Marketing Services abanye uru gi?
Ọ bụrụ na ị na-ere ngwaahịa gị na Amazon, ihe mgbaru ọsọ gị bụ ka ị na-ekpughe ihe gị n'ihu ọtụtụ ndị ahịa gị, na n'ikpeazụ ịmepụta ego ndị ọzọ. Ezubere ogo Amazon algorithm iji nye ndi na-azụ ahịa ihe kachasị mma nchọta dabere na mmasị ha na akụkọ ọchụchọ. Ya mere, ihe niile ị chọrọ bụ ịgbaso ntuziaka Amazon iji gosi ngwaahịa gị n'ihu ndị na-ege gị ntị.
Kedu ụdị atụmatụ gị dị ugbu a, ọ naghị ewute gị iji tụlee nhọrọ gị. N'ụzọ dị mma, Amazon na-enye ndị ahịa ihe dịgasị iche iche nke nwere ike ịmepụta usoro ahịa ha ma mechaa nweta ego ha ga-enweta na Amazon. Ihe omume Amazon Marketing Services bụ nhọrọ zuru oke maka ndị na-ere ahịa Amazon bụ ndị na-achọ ohere iji mụbaa ahịa ha ma mee ka ego ha nweta ego ha.
Otú ọ dị, ọ na-ebili ajụjụ ma ịkwesịrị ịnwale ọrụ ahịa ahịa ọhụrụ ma ọ bụ na-eji usoro ị gosipụtara. Ma ọ bụrụ na usoro ahịa ahịa ọhụrụ ga-apụta ọbụna karịa? Ya mere, echere m na ọ bara uru ịnwale ọrụ ahịa Amazon iji nọrọ na egwuregwu T-Amazon nke e-commerce. Ya mere, ka anyị tụlee uru na nkwenye nke AMS iji ghọta ma ọ bụ ego kwesịrị ekwesị ma ọ bụ.
Amazon Marketing Services: ọrụ ọrụ
Amazon Marketing Services (AMS) bụ nyocha mgbasa ozi ọ bụla-akwụ ụgwọ ebe ndị ahịa nwere ike nweta ngwaahịa ha n'ihu ndị a na-echebara anya na-adabere na ọchụchọ, ngwaahịa, mmasị, na akụkọ ihe mere eme ahịa.
Usoro mmemme Ahịa Amazon na-enye ohere maka ụlọ ọrụ:
Mgbasa ozi ngwaahịa;
Mgbasa ozi ọchụchọ;
Mgbasa ozi ahịa ngwaahịa.
Nanị ihe AMS mere maka ndị ahịa Amazon.Otú ọ dị, a gbanwewo iwu ndị ahụ, n'oge a, ọ dịkwa maka ịkpọpụta ndị na-edekọ akụkọ na ndị na-ere ahịa. Otú ọ dị, a ghaghị ekwupụta na ndị ahịa ndị nwere mmasị na Amazon Marketing Services kwesịrị ịbụ ndị so n'òtù Amazon Vendor Central. Ejiri ọrụ mgbasa ozi ndị a iji nye atụmatụ maka ya, na mgbasa ozi maka mgbasa ozi maka ndị ahịa Amazon. Amazon na-eji nnukwu nchekwa data iji kwado ndị na-azụ ahịa na mgbasa ozi ha kwenyere na onye na-azụ ahịa ga-ebuteghachi. Amazon na-anakọta data nke mbụ ahịa shopper na Amazon ma na-egwu ụzọ ndị ahịa na-achọ ihe na n'elu ikpo okwu. Ya mere, na-echebara ihe ndị a niile n'uche, ị nwere ike ịnweta mgbasa ozi gị n'ihu ndị ahịa nwere ike ịchọrọ mmasị na ngwaahịa ndị dị ka gị.
Ị nwere ike ijikwa mgbasa ozi mgbasa ozi site na njikwa ngwa ọrụ Amazon Marketing Services. Igwe okwu a na-enye gị ohere iji nyochaa ego gị na ego ọ bụla iji mee ka ị nwee ike nyochaa nlọghachi gị na ntinye ego. Ọzọkwa, ị nwere ike soro ọnụọgụ mgbasa ozi nke ire ere ma chọpụta ma mkpọsa mgbasa ozi gị bara uru ma ọ bụ.
Otú ọ dị, usoro Amazon a nwekwara ihe ndọghachi azụ ya. Ntugharị nke AMS abụghị onye ọrụ enyi. I nweghị ike ihichapụ mgbasa ozi emechara. Ọzọkwa, mmelite nke akụkọ ahụ na-arụkarị ọrụ ngwa ngwa Source .